100 Qof Oo Ku Dhintay Doon Ku degtay Webi kuyaal Wadanka Ciraaq.
Dagaal khasaara badan dhaliyay oo ka dhacay Waqooyiga Gaalkacyo.
Maxkamadda Sare ee Turkiga oo go'aan Taariikhi ah ka gaartay Masjidka Ayaasoofiya!
Saturday March 23, 2019 - 19:45:52 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Musiibo ay dad badan ku dhinteen ayaa ka dhacday mid kamida magaalooyinka ugu waaweyn wadanka ciraaq ee dhaca mandiqadda reergalbeedku u bixiyeen bariga dhexe.
Wararka ka imaanaya gobolka Naynawaa ayaa sheegaya in ugu yaraan 100 qof oo ubadan haween iyo carruur ay dhinteen kadib markii doon ay la socdeen kula degtay Wabiga Dajlah ee dalka Ciraaq mara.
Doonta oo ay la socdeen dalxiisayaal maxalli ah ayaa mar qura ku degtay meel ku dhow magaalada Muusil waxaana halkaas ka dhashay khasaara lama filaan ah.
Goob joogayaal ayaa sheegay in doontu ay ku degtay inta udhaxaysa magaalada Muusil iyo biya xireenka weyn ee Almuusil waxaana loo sababeeyay maamul xumo ka jirta hay'adda biyaha gobolka Naynawaa.
Caadil Cabdil Haadi oo ah R/wasaaraha xukuumadda shiicadu ku badantahay ee Ciraaq ka jirta ayaa ku baaqay in si degdeg ah xilka looga xayuubiyo mas'uuliyiinta gobolka oo uu ugu horreeyo guddoomiyaha Naynawa iyo ku xigeennadiisa.
Goobta musiibadu ka dhacday waxaa isugusoo baxay boqolaal qof oo dadkoodu ay ku fanteen biyaha wabiga Dajlah kuwaas oo wajiyadooda murugo laga dheehan karay.
Musuq maasuqa iyo maamul xumada kajirta gobolka naynawaa ayaa larumeysanyahay in ay kaalin weyn ku leedahay dhacdadii dhacday khamiistii lasoo dhaafay, mas'uulka ugu sarreeya biya xireenka Muusil iyo madaxa hay'adda biyaha Ciraaq ayaa qaadanaya mas'uuliyadda ugu weyn waxaana lafilayaa in shaqada laga eryo.
Meydadka 100 qof oo ubadan carruur iyo haween ayaa shalay oo jimca aheyd wabiga lagasoo saaray walina waxaa jira meydad baadi goob loogu jiro, diyaaradaha qumaatiga ukaca ayaa dul heehaabaya biyaha wabiga dajlah si ay usoo helaan Meydad ama dad wali nool oo biyahu meel dheer geeyeen.